Tsvaga akanakisa mamaki muMadrid | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | Spain maguta, Madrid
Una kushanyira Madrid chinhu chakakosha kutiza, sezvo guta racho riine nhamba huru yevaraidzo uye zvinhu zvakawanda zvekuona. Ino nguva isu tichataura nezve izvo zvikuru zvivakwa zveMadrid, kuwana zano rezvese izvo zvinogona kushanyirwa pane imwe getaway.
Kunyangwe zvivakwa zvisiri izvo chete izvo zvinotikwezva kuguta rino, chokwadi ndechekuti ivo chikamu chakakosha chekushanya kwevashanyi. Kune nzvimbo dzinoenderana nekuda kwekukosha kwadzo cinofungidzirwa zvivakwa zvechokwadi, saka isu tichavaisawo mune izvo zvinyorwa.
1 Almudena Cathedral
2 Tsime reCibeles
3 Prado Museum
4 Royal Palace
5 El Retiro Paki
6 Main Square
7 Gedhi reZuva
8 Tembere yeDhibhodhi
Almudena Cathedral inomira kunze kweguta kunyangwe iri nyowani, kubvira kuvakwa kwayo kwakatanga muzana ramakore rechiXNUMX. Ndizvo kereke huru ine neoclassical maitiro kunze. Mukati, zvinokatyamadza neo-Gothic dhizaini maunofanira kumira kuyemura ayo akajeka mavara akasviba magirazi windows. Izvo zvinokwanisika kushanyira iyo kedhedral mamuseum, uko iwe kwaunogona kuona ese marudzi ese ehumwe uye zvinhu zvine chekuita ne diocese yeMadrid. Pamusuwo weiyamu ino vanopawo mukana wekukwira kune dome kuti unakirwe nemaonero eguta. Iyi kereke huru inomira nekuti mu1993 yakatsaurwa naJohn Paul II, iri yega yega yerudzi rwayo kunze kweRoma.
Iyo Fuente de Cibeles inomira pamusoro pezvose kwazviri uye nekuti yave chiratidzo cheguta. Ndiyo nzvimbo inoenda Real Madrid kunopemberera kukunda kwavo uye iri padyo nePrado Museum, munzvimbo yepakati. Iyo tsime rakabuda kubva muzana ramakore gumi nemasere uye kutenderedza chikwere kune zvivakwa zvinoverengeka zvekufarira. Iyo Palacio de Cibeles kubva pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri yaive chivakwa chePosvo munguva yakapfuura asi nhasi chava neCity Hall. Bhanga reSpain rakatanhamara, chivakwa chinoremekedzwa mukati chinoshanda nevakakosha maartist akadai saGoya anogona kuwanikwa. Iwe unogona zvakare kuona iyo Palacio de Buenavista de los Duques de Alba uye iyo Palacio de Linares.
Kunyangwe ichi chisiri chivakwa pachacho, chokwadi ndechekuti ndiko kumwe kwekushanya kwakakosha kuguta. Iyo Prado Museum inochengetera yakakosha muunganidzwa mukati, nezvidimbu zvakakosha se 'Las Meninas' naVelázquez, Goya's 'Chivabvu 3, 1808' kana Rubens '' Iwo Matanho Matatu '. Iwe unogona kutora rwendo rwakatungamirwa uye iwe unofanirwa kutora kanenge maawa mashoma kuti uzvione zvakadzikama.
Imba yehumambo kana Palacio de Oriente anobva muzana ramakore gumi nemasere uye inzvimbo yepamutemo inogara Spanish Family Family. Parizvino inzvimbo inoshandiswa kumatambo uye zviitiko, sezvo mhuri ichigara muPalacio de la Zarzuela. Munguva yekushanya iwe unogona kuona nzvimbo dzakasiyana senge dzeMahara Mahofisi, Royal Pharmacy kana Royal Armory. Shanduko yemurindi inoitika neChitatu kubva Gumiguru kusvika Chikunguru na11 am
El Retiro Paki
Iyi imwe nzvimbo isiri iyo chaiyo monument asi iwe unofanirwa kuona sekunge yaive. Iyi paki hombe ine nzvimbo zhinji dzekuona, senge dziva rekugadzira iro rinogona kuonekwa kubva kuPuerta de Alcalá ine mukurumbira. Iyo Crystal Palace kubva muna 1887 Iyo ndeimwe yemifananidzo chaiyo yepaki, inogara dzimba zhinji dzenguva. PaPaseo de la Argentina kana Paseo de las Estatuas unogona kuwana zvifananidzo zvakatsaurirwa kumadzimambo ese.
Iyo Plaza Mayor iri padhuze nePuerta del Sol uye inzvimbo yakavezwa uye yakavharwa mraba iyo pateni inogona kuoneka mune mamwe maguta. Muchivara unogona kuona iyo Chiumbwa chaFelipe III kana iyo Casa de la Panadería, yaive chivakwa chekutanga kuvakwa. Iyi inzvimbo panogara paine mhepo yakawanda uye panguva yeKisimusi vane musika mukuru kwaunogona kutenga mhando dzese dzezvinhu.
Puerta del Sol inozivikanwa kutenderera pasirese nekuda kwekuve iyo nzvimbo kubva kunopera mwaka wegore chimes. Ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo muguta uye nenzvimbo dzakatipoteredza tinogona kuona iyo Post Office neiyo chime wachi. Iwe zvakare unofanirwa kutora mifananidzo ine chifananidzo cheBere uye Strawberry Muti kana chishambadziro chengano cheTío Pepe, iyo yatove imwe yekukwezva vashanyi.
Chikumbaridzo chevaIjipiti mumoyo weMadrid chiri kurova, asi ndizvo zvatiinazvo patinoshanyira Tembere yaDebod, iri muPaza de España. Iyi tembere yaive chipo kubva kuegypt yemubatanidzwa weSpain mukuchengetedza tembere dzeNubia. Iyo tembere inopfuura makore zviuru zviviri zvekuzvarwa uye yakasimudzwa dombo nedombo kubva kuEjipitori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Madhorobha eMadrid
Chii chinonzi London Pass uye kupi kwekutenga?
Tembere dzeAngkor, hameno muCambodia